AMISOM oo diidday bixinta magta shacab ay xasuuqeen | KEYDMEDIA ONLINE
Masuuliyiinta ugu sarreeya Ciidanka Nabad Ilaalinta AMISOM, ayaa diiday bixinta mag-dhawga lix ruux oo shacab ah oo ciidamadoodu ku laayeen Xera-Labaad oo ku taalla degmada Qoryoley ee Gobolka Shabeellaha hoose, sida ay ogaatay Keydmedia Online.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ku cad warqado ay is weydaar-sadeen, AMISOM, Gar-yaqaanno Soomaaliyeed iyo Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha, ee Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, oo horyaalla Keydmedia Online, hoggaanka ciidanka nabad ilaalinta u jooga dalka ayaa in muddo ah ka caga jiidayay bixinta mag-dhawga Lix ruux oo shacab ah oo AMISOM ku dhishay degmada Qoryoolay ee Gobalka Shabeellaha hoose 2016-kii.
Kiiskaan oo socday muddo Shan sanno, ayaa ilaa iyo maanta wax magdhow ah la siinin Qoysaska dadka rayidka ah ee la laayay.
Waraaq sumaddeedu tahay AMISOM/HOM//35/1213.20, oo soo baxday 06 October 2020, ayay AMISOM ku sheegtay in ay ka xuntahay geerada Lixda ruux ee ciidamadeedu ku dileen Qoryooley 17 December 2016, iyo burburka guud ahaan gaarigii ay saarnaayeen dadka rayidka ah ee la laayay.
Dadkaan Shacabka ah ee la laayay ayaa kala ah;
Sardhash Cabdullahi Maxamed
Majarudiin Axmed Maxamed
Cabdullaahi Xasan Maxamed
Sheekh Muktaar Cabdi Cali
Ruqiya Cali Mursal
Daahira Aadam Roobel.
Sidoo kale waraaqda waxaa lagu xusay in qaraabada, wakiillada dadka la laayay iyo AMISON, ay kulmeen, islana meel dhigeen diyada dhibanayaasha, hayeeshee markii arrinka loo gudbiyay Madaxda sare ee AMISOM, lagana dalbaday in ay magdhawga ku soo shubaan bankiyada AMISOM ee Soomaaliya aysan middaas ka suura galin dhankooda.
Waraaq kale oo tirsigeedu yahay 016/2021, oo soo baxday 31/3/2021, kana soo baxday, Somali South Central Law Firm, loona diray Wakiilka Gaarka ah ee Gudoomiyaha Midowga Afrika u qaabilsan ee Soomaaliya, Danjire Francisco Madeira, ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay bixinta magta dhibanayaasha, waxaana warqadda lagu caddeeyay magta uu ruux waliba xaqa u leeyahay, halka loogu shubayo iyo wakiilka loogu dhiibayo.
Waxaa kale oo lagu wargaliyay AMISOM, in aan la aqbali doonin dib u dhac kale oo ku yimaada mag bixinta, waxaana la xasuusiay in bil kasta ay 10% ku kordhi doonto diyada, si sharci ah, haddii aan xilliga la qorsheeyay lacagta la bixin.
Warqaddan, waxaa lagu war galiyay Wasiirka Wasaaradda Haweenka, Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Labo xildhibaan, iyo wakiillda dhibanayaasha.
Waraaq kale oo ay Halganmedia usoo gudbisay Keydmedia Online oo ka timid Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha, ee Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, oo soo baxday, 21 March 2021, ayaa iyana loo diray Danjire Francisco Madeira, UNSOM iyo AMISOM, waxaana lagu dalbay in lacagta magta ah baxsho.
Sida ay ogaatay Keydmedia Online, Masuuliyiinta Sare ee AMISOM, ayaa si cad hadda u diiday bixinta mag-dhawga, dadka shacbka ah ay laayeeen Saddex sano ka hor, waxayna ku marmarsiyoodeen, in ay dib u furayaan baaritaanno la xariira kiskaan.
Ma aha markii koobaad ee AMISOM, diiddo bixinta magta dad ay dileen, Dowladda Soomaaliya ayaana ka gaabisay la xisaab tanka ciidamada ajanabiga ah ee jooga dalka.